फेरी ह्वात्तै घट्यो कुखुराको मासु, घटेपछि रेट कति भयो ? « Gaunbeshi
फेरी ह्वात्तै घट्यो कुखुराको मासु, घटेपछि रेट कति भयो ?
मासुको मूल्य घटेसँगै कुखुरापालक किसानहरू त्रस्त भएका छन् । कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म थला परेको पोल्ट्री व्यवसायले लय समातिरहेका बेला बर्डफ्लु भित्रिनु किसानका लागि थप चिन्ताको विषय बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कुखुरामा संक्रमण पुष्टि भइनसेकाले किसानहरूलाई हतास नहुन पोल्ट्री व्यवसायी महासंघले आग्रह गरेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा